Baarlamaanka Hirshabeelle oo go’aan ka qaadanaya colaadaha sokeeye ee gobolkaas – Kalfadhi
Guddoomiyaha GolahaWakiillada Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, Sh. Cusmaan Barre Maxamed, ayaa u sheegay Kalfadhi in marka uu furmo Kalfadhiga 5-aad ee Golaha ay waxa ugu horreeya, ee ay ka hadli doonaan, ka dhigi doonaan colaadaha sokeeye ee ka taagan Hirshabeelle iyo Xudduudiisa uu la leeyahay Galmudug.
Colaaddaas, oo wax badan taagneyd, soona noqnoqotay, ayuu Baarlamaanka Hirshabeelle hadda doonayaa inuu raadiyo xalkeeda. “Markii uu furmo Kalfadhiga Shanaad ee Baarlamaanka Hirshabeelle, ajandaha waxaan ku soo dari doonaa qodob ka hadlaya xal u helidda colaad beeleedyada” ayuu yiri Guddoomiye Barre.
Intaas waxa uu raaciyey iney doonayaan iney kulankooda ugu horreeya ka soo saaraan go’aan daminaya colaaddaas. “Waxaan rajeyneynaa inaan ka soo saari doonno qodobbo lagu dhameeyo dagaalka salka ku haaya beelaha ku murma daaqsinta iyo dhul beereedka” ayuu Barre raaciyey hadalkiisa. Kalfadhiga 5-aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle waxa uu furmayaa 5-ta bisha soo socota.
Colaadda sokeeye ee uu Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Hirshabeelle ka hadlayo waxay badideed ka taagan tahay deegaanno ka tirsan degmooyinka Maxaas iyo Guriceel, oo kala hoos taga Hirshabeelle iyo Galmudug, waxa uuna Guddoomiye Barre ka hor Kalfadhiga Golaha ku baaqayaa iney beelaha dagaalamaya joojiyaan daadinta dhiigooda. “Dhinacyada dagaalamaya waxaan ugu baaqayaa iney si deg deg ah dagaalka u joojiyaan” ayuu yiri Guddoomiye Barre.
Hase ahaatee, waxa ay sidoo kale beela kale ku dagaalamayaan deegaano ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxa uuna Barre ka dalbanayaa inuu wax-garadka deegaanku u kaco joojinta dhiigga ehelkooda ee daadanaya. “Odayaasha dhaqanka iyo guud ahaan waxgaradka gobalka, aqoonyahaanada iyo masuuliyiinta degmooyinka, waxaan ugu baaqayaa iney ku baxaan oo laga dhex dhaliyo xal-waara beelaha dagaalamaya” ayuu Guddoomiye Barre ku yiri Kalfadhi.
Hadda, waxaa Maxaas ku sugan Xubno ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle, oo uu wehliyo Guddoomiyaha Gobalka Hiiraan, Yuusuf Axmed Hagar, kuwaas oo ku baxay daminta colaadda sokeeye ee ka jirta halkaas. Hagar ayaa u sheegay Kalfadhi iney rajo wanaagsan ka qabaan dhameynta xiisadda ka taagan meesha ay joogaan.
Aqalka Sare oo sheegay iney sameynta sharciyada u dedejiyaan si la mid ah Golaha Shacabka